Isebe leMetriki: Guqula, ukhule kunye nokuKhangela ukuThathwa kweNkqubo yokuSebenza | Martech Zone
Iimpawu zeSebe ibonelela ngeqonga elikunceda ukuba uvelise amakhonkco ephulo kwindalo iphela anokukunceda ukuba ufumane ukwamkelwa kwesicelo somzimba ngokwasemzimbeni. Iqonga labo linokukunceda:
Guqula abasebenzisi bewebhusayithi babe ngabasebenzisi beapps, usebenzisa iphepha lombhalo-le-usetyenziso okanye ibhena yesicelo jikelele
Nceda ukhulise usetyenziso lwakho ngokudlulisela, ukukhuthaza kunye namaphulo okuxhasa.
Yongeza amaxabiso okusebenza kwefowuni ngokungena ngokuzenzekelayo kunye nokukhuthaza.
Ukulandela umkhondo weemetriki zokwamkelwa ngokuchanekileyo ngejelo, umsebenzisi okanye umxholo.
Ngokufaka I-SDK yesebe kwi-iPhone yakho okanye usetyenziso lwe-Android, izixhumanisi zeSebe zidlulisa idatha ekubhekiswa kuyo kunye nokufakwa kwimeko, kukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso amava akho e-app kuxhomekeke kubasebenzisi bakho. Unokwenza ukwamkelwa okwenzelwe wena xa kuthunyelwe ngumhlobo okanye ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufaka emva kokufaka kubasebenzisi abohlukeneyo.
Iqonga libonelela nge kubahlalutyi Kuya kufuneka wandise iphulo lakho lokukhuphela usetyenziso ngokulinganisa onke amajelo kunye nomsitho. Sebenzisa amakhonkco eSebe ungathumela abatyeleli bewebhu kumxholo kwi-app yakho ngaphandle komthungo, nokuba abanayo le app sele ifakiwe.
tags: yesebeiimetriki zesebeisebe.io